Wararkii ugu dambeeyey ee Ceerigaabo iyo Xaaladda gobolka Sanaag – Radio Daljir
Wararkii ugu dambeeyey ee Ceerigaabo iyo Xaaladda gobolka Sanaag
Luulyo 11, 2019 9:38 b 0
Wararka idaacada Daljir ay ka helayso magaalada Ceerigaabo oo shalay dagaal xooggan uu ku dhexmaray Ciidamada Soomaaliland iyo jabhadda Dulmidiid ee Korneel Caarre ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe mar kale ciidamada Soomaliland ay isku dayeen in ay dhanka Buuraleyda Ceerigaabo u dhaqaaqaan, hase yeeshee waxa ay labada ciidan isku muteen iridka Karin oo ah halka laga galo Buurta Daallo.
Ciidamada Soomaliland dib ayey halkaas uga soo laabteen. Buuraleyda Ceerigaabo iyo laba kamid ah dariiqyada laga soo galo magaalada waxay gacanta ugu jiraan Jabhada Dulmidiid.
Dagaalkii shalay ka dhacay Ceerigaabo ayaa ciidamada Soomaaliland waxaa looga gubay gaadiid dagaal waxaana looga dilay laba sarkaal iyo askar aan weli tiradooda la sheegin, una badan degaanka galbeedka Somaliland.
dhanka kale, isla shalay dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Soomaliland ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Korneel Caare ayaa hore waxa uu wacad ugu maray in gudaha Soomaaliland ay xabada ka bilaaban doonto.
Dagaalada qabiileysan ee aagga Ceel Afweyn oo laga tuhmayo raadka siyaasadda Madaxweyne Muuse Biixi ayaa salka ku haya siyaasad dowlo oo loo aaneynayo in ay ku saleysantahay kala eexsi, qabaa’ilada qaarkoodna ay leeyihiin waxa ay la dirirayaan ciidamada Somaliland iyo qabaa’ilo ciidanku taageersanyahay.
Daljir kala soco wararkii ugu danbeeyey ee Ceerigaabo iyo Burco.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo Bosaaso lagu soo dhaweeyay (dhegayso)
Duleedka Gaalkacyo oo lagu laayay dad Shacab ah